Madaxweynaha Somaliya oo ka qaybgalaya Shir looga hadlaayo arimaha Bini’aadinimada (Sawirada Daawo) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somaliya oo ka qaybgalaya Shir looga hadlaayo arimaha Bini’aadinimada (Sawirada Daawo)
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wuxuu kaga qaybgalayaa Shirka looga hadlaayo arimaha ku aadan Bini’aadinimada.
Shirkaan oo ay ka qaybgalayaan madax kala duwan oo dalalka caalamka ka tirsan, ayaa Khudbad uu ka jeediyay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kaga hadlay Xaalada Bini’aadinimo ee dalka Somaliya.
Madaxweyne Xasan ayaa warbixin ka siiyay ka qaybgalayaasha Shirkaan caalamiga xaalada Bini’aadinimada dalka Somaliya oo uu sheegay Madaxweynaha inay tahay mid wanaagsan, balse ay jiraan qaar liito.
Madaxda Shirkaan ka qaybgalaysa, ayaa sidoo kale jeedin doono Khudbado kala duwan oo ku aadan Xaaladaha Bini’aadinimada Dalalkooda iyo mida caalamka.
Shirkaan wuxuu socon doonaa muddo labo maalin ah, waxaana la filayaa in maalinta beri ah la soo gaba gabeeyo.
Madaxweyne Xasan ayaa inta Turkiga uu ku sugan yahay, wuxuu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda ka soo qaybgasha Shirkaasi.
Qarax Khasaare geystay oo lala beegsaday ciidamo ku sugan xafada kpp
Jubbaland oo taageertay go’aankii Madaxweynaha uu ku ansixiyay hanaanka doorashada